UMichael Fassbender Ubhekwe Ukuphula Ingalo Yakhe Hhayi Ukuthi Azoqamba KwiSteve Jobs Movie | Ngivela kwa-mac
UMichael Fassbender ucabange ukwephula ingalo ukugwema ukulingisa kumdlalo weSteve Jobs
Ifilimu yakamuva ekhuluma ngempilo kaSteve Jobs, edlala indawo kaMichael Fassbender eceleni kukaGilliam Anderson futhi ibhalwe ngu-Aaron Sorking bekungekho okunye ngokuya ngemiklomelo. Kodwa-ke, ngokuqoqwa, ifilimu yayiyinhlekelele yangempela engabuyisanga imali eyayitshalwe yinkampani yokukhiqiza.
Umlingisi ophambili wefilimu, uMichael Fassbender ongene endimeni kaSteve Jobs, usanda kusho kwiToronto International Film Festival, ukuthi ubesezophula ingalo ukuze akwazi ukushiya iphrojekthi abehlanganyele kuyo.
Njengoba kushiwo umlingisi oyinhloko uqobo:
Lapho kuqala izivivinyo zokuqala, ngangizama ukuthola izaba zokukwazi ukushiya le phrojekthi. Ngikhumbula ngithi kumshayeli wami "Uma ngifaka ingalo yami emnyango uyayivala ...". Benginesidingo sokushiya iphrojekthi eyinkimbinkimbi ebengizifake kuyo.
Le phrojekthi ihambe ezandleni eziningi ngaphambi kokuthi uFassbender amukele le ndima. ULeonardo DiCaprio noCristian Bale ngezinye zezinketho zokuqala zenkampani ekhiqiza iSony. UFassbender wagcina enze futhi nomsebenzi omuhle owamenza waqokwa emkhakheni wokugcina wama-Academy Awards, kodwa kwakungewona wodwa, njengoba naye waqokelwa amaBritish BAFTA kanye neGolden Globes. ULeonardo DiCaprio wamhlwitha umklomelo kuye .
UFassbender uthi ngenkathi eqala ukufunda umbhalo ka-Aaron Sorkin ngabona ukuthi le phrojekthi yayiyinkimbinkimbi. Uyakuqinisekisa ukuthi wayezizwa njengomfundi owayefunda kanzima owayenenkinga yokuthola le ndima futhi wabona ukuthi le ndima kwakungeyona eyakhe, kodwa eyomunye umuntu owayekufanelekela kangcono ukudlala indima yeMisebenzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » UMichael Fassbender ucabange ukwephula ingalo ukugwema ukulingisa kumdlalo weSteve Jobs
I-iPhone 7 imemezele ngokumangazayo kuvidiyo entsha
Ungayisebenzisa kanjani isikrini esisha sokukhiya se-iOS 10 (II)